Saliida yamaarugga caanaha ku jirta
Saliida yamaaruggu waa nooc ka mid ah saliida caafimaadka ee la cuni karo oo dabiici ah kaas oo laga sameeyay saliida iniin yarooyinka ku jirta Waxay leedahay qiimo nafaqo oo sarreeya. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee saliida yamaaruggu ka kooban tahay waa asiidh dufan, taas oo muhiim u ah aashitada dufanka leh, yacni linoleic acid (Content 45%). Caano ...
Daawada qadiimiga ah ee Shiinaha ee Han Han waxay yareyn kartaa dhimashada coronavirus cusub kala bar.
Daawada qadiimiga ah ee Shiinaha ee Han Han waxay ka timi isku darka daawada dhaqameed ee Shiinaha. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu daaweeyo bukaanka oof-wareenka fudud, caadiga ah iyo daran ee qaba infekshinka cusub ee 'Coronavirus'. Waxa kale oo si macquul ah loogu isticmaali karaa daaweynta xanuunka daran ...
Saldhigga Saadka Saadka ugu Weyn ee Shiinayska Shiinayska ah ayaa si rasmi ah loo hawl geliyey
Bishii Nofeembar 28-keedii, Saldhigga Saadka ee Agabka Daawooyinka ee Guanzhong Shiinaha, iyo sidoo kale saldhiggii ugu weynaa ee waqooyi-galbeed ee Shiinaha, ayaa si rasmi ah loo hawlgeliyey. Waxay qancin kartaa 70% dalabaadka keydinta ee qalabka daaweynta Shiinaha ee Shaanxi. Tra ...
Shirweynihii 5aad ee Saadka Qalabka Dawooyinka Shiinaha ayaa lagu qabtay Xi 'an
Bishii Nofeembar 27, oo ay si wada jir ah u soo abaabuleen Ururka Shiino ee Bakhaarrada iyo Qaybinta (CAWD), Ururka Shiinaha ee Daawada Shiinaha (TCM), Xiriirka Caalamiga ah ee Ururada Daawada Shiinaha, oo ay fulisay Ururka Shiinaha ee Bakhaarrada iyo Qaybinta Shiinaha ...